Sida loogu rogo aalad kasta oo guurguura shaashad labaad | Androidsis
Sida loogu beddelo aaladda mobilada shaashadda kombiyuutarkaaga oo leh Deskreen
Mararka qaarkood waxay ku imaan kartaa waxtar ogow sida loo rogo mobilada gacanta ama kiniiniga loo yaqaan "Monitor" kombuyuutarkeena. Gaar ahaan haddii aan ka sameyno barnaamijka furan ee furan sida Deskreen iyo in aan ku heli karno bilaash.
Daqiiqadahaas markay waxaan rabnaa inaan soo bandhigno iyo kaniinkaas in aynaan mar dambe adeegsan oo aynnu boodh ku leenahay qolka armaajada ama khaanadda, waxay faa'iido u yeelan kartaa hawshaas, ama si fudud loo soo saaro heer sare oo aan isbarbardhigi karno tirooyinka u dhexeeya shaashadda kombuyuutarkeena iyo kormeerahan siyaada ah Aynu ku sameyno barnaamijkan xiisaha leh ee loogu talagalay Android.
1 Waa maxay Deskreen
2 Sidee barnaamijkani u shaqeeyaa
3 Sida loogu rogo aalad kasta oo guurguura shaashad labaad
Waa maxay Deskreen
Deskreen waa codsi noo oggolaanaya inaan ku isticmaalno aalad kasta oo casri ah, sida kiniin ama taleefanka gacanta, oo ah qalabka kormeerka labaad ee kombuyuutarkayaga. Waxaan nahay isagoo daliishanaya barnaamij furan taasina waxay noo ogolaaneysaa inaan u isticmaalno aalad kasta oo leh biraawsar shabakad ahaan shaashad labaad oo ku saabsan isku xirka Wi-Fi.
Waa sidaas xitaa Deskreen wuxuu la shaqeeyaa Windows, MacOS iyo Linux, sidaa darteed wax dhibaato ah nagama soo gaari doonto adeegsiga kiniinkaas ama mobiladaas oo aanan u isticmaalin shaashad labaad si aan khibradeena ugu isticmaalno PC.
Waa in la sheegaa taas Deskreen wuxuu ku dhashay dhiirigelinta xalka ay Apple ku leedahay Sidecar adoo u oggolaanaya isticmaalka iPad-ka inuu yahay shaashad labaad oo loo yaqaan 'Mac'. Sababtoo ah waxaan haysannaa qalab aad iyo aad u badan oo guriga ku yaal iyada oo aan la isticmaalin, xitaa Samsung ayaa ku booday tareenka si ay ugu soo bandhigto khibradaas kiniinka Galaxy Tab S7.
Maxay muhiim tahay in qalabkani isticmaali kartaa biraawsarka webka xalkan Deskreen inuu si fiican u shaqeeyo.
Sidee barnaamijkani u shaqeeyaa
App Tani sidoo kale wuxuu ku shaqeeyaa isku xirka LAN (waa la xiray) sidii aan ku dhahnay WiFi shaqooyinkan shaashadda sare ah. Waa inaan ku tashanno xaqiiqda ah inaan u adeegsan karno biraawsarka webka qalab kasta muraayadda shaashadda ama si fudud u qaadanno wixii codsi ah oo aan ku dhejin karno shaashad buuxda.
Sidaad arki karto, waa a codsi bixiya dabacsanaan badan waxaana lagu siin karaa adeegsiyo kala duwan hadba baahidayada. Waxay sidoo kale awood u leedahay inay taageerto wadaagista shaashad badan ee aaladaha aan dooneyno oo dhan iyo, dabcan, waxay leedahay qarsoodi-ilaa-dhammaad ama dhammaad-ilaa-dhammaad sir ah xagga amniga iyo asturnaanta.
Waxay kaloo na siisaa xoogaa dejinta tayada sawirka la saadaaliyay shaashadan labaad, ama si otomaatig ah u samee.
Waxa ugu xiisaha badan ayaa ah inaan awoodno ku raaxayso waayo-aragnimada kormeeraha PC-ga markaad isticmaaleyso qalfoof sida Muuqaalka Muuqaalka Dummy taasina waxay la mid tahay USB drive-ka. Waxaa loo baahan yahay in lagu xiro kumbuyuutarka oo loo ekeysiiyo in kormeer dibadeed ku xiran yahay. Waxay kuxirantahay nooca xiriirku wuxuu noqon karaa 10 euro. In Amazon aad leedahay dhowr ka mid ah.
Sida loogu rogo aalad kasta oo guurguura shaashad labaad
Waxaan u soconaa ka soo dejiso arjiga degelkooda: download
Waxaan aadeynaa ku rakib codsiga nidaamkayaga iyo markaan bilowno, lambar QR ayaa la soo saaray oo aan ku baari karno kiniin ama taleefan. Waxaan sidoo kale haysannaa ikhtiyaarka ah inaan nuqul ka qaadno URL-ka la siiyay si aan ugu furno biraawsar aaladda labaad oo aan dooneyno inaan ugu isticmaalno shaashad dheeraad ah.
Marka isku xirnaanta la sameeyo, waxaan si fudud u arki doonaa shaashad leh macluumaadka IP iyo xog kale
Waxaan xulaynaa shaashadda oo buuxda ama codsi daaqad leh oo hoose
Waxaan horeyba u dooranay hoosta haddii aan doorano shaashadda buuxda oo aan wadaagno
Sidaas oo kale u wareeji mobiil kasta ama kaniiniga shaashad labaad kombuyuutarkaaga oo waxaad ku raaxeysataa khibrad dhammaystiran markaad adeegsanaysid aaladdaas aad hilmaamtay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Sida loogu beddelo aaladda mobilada shaashadda kombiyuutarkaaga oo leh Deskreen
Download APK Ku turunturoodo Guys mod Full (All Unlocked) shaqeynaya !!
Supercell's Brawl Stars wuxuu dhaafayaa $ 1.000 billion oo dakhli ah